UYesu uphilisa uBartimeus oyimpumputhe (Marko 10: 46-52) - Uhlalutyo
Unqulo & Umoya IBhayibhile
UYesu uphilisa uBartimeus oyimpumputhe (Marko 10: 46-52)
Uhlalutyo kunye neNgxelo
46 Bafika eYeriko; kwathi ekuphumeni kwakhe eJeriko kunye nabafundi bakhe nabantu abaninzi, uBartimayo oyimpumputhe, unyana kaTimayo, wahlala ngasecaleni lomgwaqo. 47 Kwathi ekuvile ukuba nguYesu waseNazarete, waqala ukukhala, athi, Yesu, nyana kaDavide, ndiba nenceba kum.
48 Kwaye abaninzi bammangalela ukuba abe nokuthula; kodwa wamemeza kakhulu, Ndodana kaDavide, ndiba nenceba kum. 49 Waye wema uYesu, wamyalela ukuba abizwe. Bambiza indoda eyimfama, bethi kuye, Yiba lukhuni, vuka; u kubize. 50 Wayehlamba ingubo yakhe, wavuka, waya kuYesu.
51 Waphendula uYesu wathi kuye, Ufuna ntoni ukuba ndiyenze kuwe? Indoda eyimfama yathi kuye, Nkosi, ukuba ndibone. 52 Wathi uYesu kuye, Hamba uye; lwakho ukholo lukuphilisa. Kwaoko wabuya wabona, wamlandela uYesu endleleni.
Thelekisa : Mateyu 20: 29-34; Luka 18: 35-43
UYesu, uNyana kaDavide?
IYeriko ihamba ngendlela eya eYerusalem kuYesu, kodwa kusobala ukuba akukho nto inomdla eyenzekayo xa wayesekho. Kodwa xa ephuma, uYesu wahlangana nendoda eyimfama eyayinokholo lokuba yayiyakwazi ukuphilisa ukuphola kwakhe. Eli akusilokuqala ngethuba uYesu waphilisa umntu oyimpumputhe kwaye akunakwenzeka ukuba le siganeko kwakuthatyathwa ukuba ifundwe ngokubhekiselele kwimiyalezo yangaphambili kuneyaphambili.
Ndiyazibuza ukuba kutheni, ekuqaleni, abantu bazama ukumisa umntu oyimfama ukuba angabizi kuYesu. Ndiqinisekile ukuba kufuneka ukuba wayedume ngokuba ngumphululi ngeli nqanaba - ngokwaneleyo enye indoda eyimfama eyayiyazi kakuhle ukuba wayengubani kwaye yintoni anokukwazi ukuyenza.
Ukuba kunjalo, kutheni abantu bezama ukummisa? Ngaba kunokuyenza nantoni na eYuda - kunokwenzeka ukuba abantu apha abavuyiswa ngoYesu?
Kufuneka kuqatshelwe ukuba le ngenye yezihlandlo ezimbalwa kude kube ngoko uYesu uye wachongwa ngeNazarete. Enyanisweni, okunye kuphela okuphindwe kabini kwada kwafika kwisahluko sokuqala.
Kwindinyana yesithoba sinokufunda "UYesu wevela eNazarete yaseGalili " kwaye kamva xa uYesu ekhupha iimoya ezingcolileyo eKapernahum, enye imimoya imchaza ngokuthi "nguYesu waseNazarete." Lo mntu uyimpumputhe kuphela okwesibini ukusazi ukuba uYesu unjalo-kwaye akayiyo inkampani enhle.
Leli lixesha lokuqala lokuthi uYesu uchongwa ngokuthi "unyana kaDavide." Kwaxelwa kwangaphambili ukuba uMesiya wayeza kuNdlu kaDavide, kodwa ngoku uhlanga lukaYesu aluzange lukhankanywe nonke (uMarko iindaba ezilungileyo ngaphandle naluphi na ulwazi malunga nosapho lukaYesu nokuzalwa kwakhe). Kubonakala kunengqiqo ukugqiba ukuba uMarko kwafuneka avelise loo nkcazelo yengcaciso ngexesha elithile kwaye oku kulungile. Isalathisi sinokubuyisela emuva kuDavide ekubuyiseleni eYerusalem ukubiza ubukumkani bakhe njengoko kuchazwe kwiSamuweli 19-20.
Ngaba akunakwenzeka ukuba uYesu umbuze into ayifunayo? Nangona ukuba uYesu wayengenguye uThixo (kwaye ke, engaziwa ), kodwa nje ngumsebenzi osisimangaliso ojikelezayo ekuphiliseni izifo zabantu, kufuneka kubonakale kuye ukuba yintoni na indoda eyimfama ekhuphukela kuye. Ngaba kungekhona kuncibilikisa ukunyanzela loo mntu ukuba athi? Ingaba ufuna nje abantu kwisihlwele ukuba bakuve oko kuthethwayo? Kubalulekile ukuphawula apha ngoxa uLuka evuma ukuba kukho indoda engaboniyo (Luka 18:35), uMathewu wabhala ubukho bamadoda amabini amfama (Mateyu 20:30).
Ndiyicinga ukuba kubalulekile ukuqonda ukuba mhlawumbi kwakungenakucingelwa ukuba kufundwa ngokoqobo kwindawo yokuqala. Ukwenza ukuba impumputhe ibone kwakhona ibonakala yindlela yokuthetha ngokuthi u-Israyeli 'aphinde aphinde awubone' ngokomoya. UYesu uza 'kuvusa' amaSirayeli kwaye awaphulukise ukukwazi kwabo ukubona oko uThixo akufunayo kubo.
Ukholo lomntu oyimfama kuYesu yintoni eyamvumela ukuba aphiliswe. Ngokufanayo, amaSirayeli aya kuphiliswa ixesha elide njengoko benokholo kuYesu nakuThixo. Ngelishwa, liyimxholo ehambelana noMarko kunye nezinye iincwadi zeVangeli ukuba amaJuda anakho ukholo kuYesu-kwaye ukungabi nalukholo kukubathintela ekuqondeni ukuba ngubani na uYesu ngokwenene nento ayenzayo.
Bayabaphi AbaFarisi EBhayibhileni?
UMoses kunye neMithetho Elishumi-Intetho yeBhayibhile
Yintoni IBhayibhile Eyithetha Ngamaqhenqa Neqhenqa?
Ukuhlaziywa kwePokotho e-Sword
UYesu ngendlela abacebileyo abaya ngayo ezulwini (Marko 10: 17-25)
Ngubani owayengumPotifari eBhayibhileni?
Wayengubani uEhudi eBhayibhileni?
UYesu wathanjelwa eBhetani (Marko 14: 3-9)
Iprofayile yeNgingqi yaseGalili - Imbali, iJografi, iNkolo
Iiminyaniso zeBhayibhile kwiNtsingiselo Yothando
Iimfundiso zeBhayibhile malunga nokuLuthisa
Iingoma eziphezulu ezikhutshwe yi-Beatles
IGulf of Maine
UNC Asheville GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Xa i-Personal 'A' ingasetyenziswa?
Iincwadi Ezivela kuGugu Gobind Singh Ku-Aurangzeb (1705)
IKhomishini yeSanitary (USSC)
Izixhobo zokuPhilisa okuHloniphekileyo zoRhwebo
Iyiphi indlela yeCecchetti Ballet?
Icawa yamaSabatha yamaSabatha
Kutheni Uhlala Uhluleka Iimviwo Zakho
'Non Son Piu Cosa, Cosa Faccio' Iingoma kunye nokuguqulelwa kwimiqulu
Iincwadana eziMnandi zoSahlulo soThathane
Iintlobo ezine: I-Operatic Soul
I-Crystal Ukukhula: iingxaki zokujongana neengxaki
Ubungcwele bukaThixo bunjani?
Ukuziqhelanisa kweeNtsapho zoLuntu kunye neNtwana
Drive That Tube / Ukulungiswa Kusebenza Ngasemva Kwesikebhe
Iinkqubo ze-MIT Sloan kunye ne-Admissions
I-Biography kunye neProfayili kaHelio Gracie
Isihloko somntu siqu
ISouth School of Mines Admissions
Ukulungiswa kobugcisa ngexesha leMfazwe yombutho
Ukuchonga i-Jeep Grand Cherokee Shifting Problems
Iyini iSuku lokuzalwa lukaSara?
IJhanas okanye iDhyanas